Fampiasana tokana avo lenta AV Fistula Needle Set ny orinasa sy mpanamboatra | Sanxin
Fampiasana tokana AV Fistula Needle Sets dia ampiasaina amin'ny rà mandriaka sy ny rafi-pamokarana rà hanangonana rà amin'ny vatan'olombelona ary hampitana ireo ra voadio na singa ao amin'ny ra miverina amin'ny vatan'olombelona. Ny AV Fistula Needle Sets dia nampiasaina tao amin'ny toeram-pitsaboana an-trano sy tany ivelany nandritra ny am-polony taona maro. Izy io dia vokatra matotra be mpampiasa amin'ny toeram-pitsaboana ho an'ny dialyom-paharetan'ny marary.
Fitaovana fiarovana fiarovana manokana mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana iatrogenika.
◆Ny lavaka miverina boribory lavalava sy ny famolavolana elatra mihodina dia afaka manamora ny fanitsiana ny fikorianan'ny rà sy ny tsindry, izay mahasoa amin'ny fanitsiana ny zoro fanjaitra ary hiantohana ny kalitaon'ny dialyse. fantsona
◆ Ny menaka silika dia voahodina amin'ny alika fanindroany. Ny fanjaitra fanjaitra dia nohosorana fanamafisam-peo tsy manam-paharoa. Mba hahazoana antoka ny hamafin'ny fanjaitra tsirairay, dia atao ny fanaraha-maso fanamafisana feno
◆ Ny fitsaboana silicification tsara sy mitovy, biocompatibility tsara, mampihena ny fanoherana ny puncture.
◆ Miaraka amin'ny loko isan-karazany, mora ny mamantatra ireo modely fanjaitra sy ny famaritana
Ny fanjaitra AV Fistula dia mametraka modely sy tsipiriany:
Karazana mahazatra: Blue 15G, Green 16G, Yellow 17G, Red 18G.
Karazana fiarovana: Blue 15G, Green 16G, Yellow 17G, Red 18G.
Karazana elatra raikitra: Blue 15G, Green 16G, Yellow 17G, Red 18G.
Karazana elatra fihodinana: Blue 15G, Green 16G, Yellow 17G, Red 18G.
Teo aloha: Vovoka hemodialisis (mifandray amin'ny masinina)
Manaraka: Fonosana katesera afovoan-tany (ho an'ny dialyse)